N'ogbe Artificial turf maka football / bọl ebe 50mm Manufacturer and Supplier | Jieyuanda
Dị ka mkpa dị iche iche si dị, nhazi ọkwa nke turf artificial dị iche. Dabere na ebumnuche ahụ, enwere ike kee ya ụzọ abụọ: oge ​​ezumike na egwuregwu. Dị ka nkọwa ndị ahụ si dị, e kewara ya ụzọ atọ: monofilament, mesh, straight and curved. Ọnụahịa nke turf artificial bụ tumadi kpebisiri ike site n'akụkụ atọ: ahịhịa dị elu, njupụta, na ọnụego Fendt. Ihe na-esonụ bụ nkọwa zuru ezu, enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka.
Arfik wuru ewu ewu na ebe ọha na eze dịka ogige, ngalaba nhazi, na ámá egwuregwu. Arfik wuru abụghị naanị mgbochi skid, iwepu uzuzu, ma dị ọcha, kamakwa ezigbo ahịhịa, nwere mmetụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ na-aghọ arịa ụlọ na ịchọ mma nkịtị na ndị mmadụ hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ya mere, atụmanya nke turf artificial bụ sara mbara, nke bụkwa ihe kpatara na-aga n'ihu na-apụta nke ndị na-emepụta turf artificial na mmepe ọrụ ngwa ngwa. Tupu ịtọ nkịtị turf wuru, lelee àgwà nke turf ya na keakamere turf mmepụta unit, na-elele ma ihe onwunwe àgwà, njupụta na ịkpa ákwà usoro nke turf ruru eru izute chọrọ nke ojiji. Agaghị enwe karịa isi njikọ 30 na saịtị ọkọlọtọ. N'otu oge ahụ, chọpụta ma ogo njuputa ọ na-ezute nchedo gburugburu ebe obibi. N'oge usoro ịtọgbọ, ekwesịrị iji ngwa ọrụ pụrụ iche wee belata ma kpoo ahịhịa ahụ dịka nkọwa ndị ahụ si dị, a ga-egbutu ahịhịa ahịhịa amachie ma mee ka ọ daa. Jiri ahịhịa pụrụ iche maka ahịhịa artificial na-ejikọ ala, na nkwonkwo ekwesịghị ị gafere 2mm. Ọnọdụ okpomọkụ n'oge njikọ ekwesịghị ịdị oke ala, na ọnọdụ ihu igwe kwesịrị ịdị elu karịa 10 ℃ maka owuwu, ma ọ bụghị ya, ọ ga-eme ka njikọta ogologo oge na ọbụlagodi na-adịghị arapara n'ahụ. Nke dị elu karịa njupụta nke turf artificial, ogologo oge ahịhịa dị elu, nke dị elu karịa ọnụego Fendt na ọnụahịa dị elu.
Nke dị elu karịa njupụta nke turf artificial, ogologo oge ahịhịa dị elu, nke dị elu karịa ọnụego Fendt na ọnụahịa dị elu. Ekpebisiri onu ahia site na oke na nkowa nke ahihia. Ihe dị iche iche ga-emetụta ọnụahịa ahụ, nkọwa dị iche iche ga-emetụtakwa ọnụahịa nke ahịhịa artificial. Ahịhịa ahụ nwekwara ahịhịa dị iche na ịdị elu Fendt. Ọnụahịa ndị a dị iche iche ga-adị iche, yabụ ịkwesịrị ịma ụdị ebumnuche ị na-azụ, wee chọpụta ọnụahịa ikpeazụ dịka ebumnuche dị iche. Ihe a dị n'elu bụ nkọwapụta zuru ezu banyere turf artificial. Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị.
Arti turik maka bọl / ebe bọọlụ 60mm
Mpaghara bọọlụ na-agbanye ahịhịa ahịhịa ahịhịa na-ewu ewu nke kachasị ewu ewu na ọ bụkwa ụdị a na-adịgide adịgide, n'ihi na yarn ya ga-anagide njigide na akwa nke mgbanwe mgbanwe.
Ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma dị ka ama egwuregwu dị ka ọ ga-anabata ihe ruru paụnd atọ nke rọba kwa square.Ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ya ji bụrụ nhọrọ a ma ama ma na-enye nnukwu nloghachi na itinye ego gị.
Nke gara aga: Emeputa ọkọlọtọ Artificial Grass For Fooball Field - Artificial layout lawn - Jieyuanda
Osote: Ru ala maka Croquet 10mm